Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi I-John Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola owaziwa ngegama lesidlaliso "Umnumzane“. Indaba yethu yeJohn Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Ukuphila Kwasekuseni kanye nokuvuka kukaJohn Lundstram. Isikweletu Sezithombe- UThebweb, BBC, MSN neLiverpoolEcho
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi wavuka emuntwini ongesiNgisikonke ukuba the ukushaya kwenhliziyo kweqembu lakhe likagesi iSheffield United elibe nesiqalo esihle sesizini ye-2019 / 2010 Premier League. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abalandeli bebhola abacabanga ukuthi inguqulo yethu yeJohn Lundstram's Biography ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
UJohn David Lundstram wazalwa ngosuku lwe-18th lukaFebhuwari 1994 kubazali bakhe edolobheni laseLiverpool, e-United Kingdom. Indoda yesiNgisi evela eNyakatho Ntshonalanga yeNgilandi yazalwa njengengane yesibili kubazali bayo abathandekayo ababoniswe ngezansi;
Hlangana Nabazali bakaJohn Lundstram. Isikweletu Sezithombe- Instagram
UJohn Lundstram uduma evela emndenini webanga eliphakathi osebenza ngubaba wakhe owathola isinkwa sakhe sansuku zonke edolobheni laseLiverpool. UJohn Lundstram unomndeni wakhe odabuka edolobheni elikhulu [iLiverpool], elidume ngojantshi wokuqala wesitimela wezwe (owakhiwa ku-1830) kanye nokuhlonishwa kwalo isihloko seGuinness Book of Record ngokuba yiNhloko-dolobha yasePop.
UJohn Lundstram akakhulelanga yedwa, eceleni kwabazali bakhe KODWA udadewabo omdala osaziwayo ogama lakhe linguJodie Lundstram (iminyaka engu-7 isisikhulu sakhe). Uthi bewazi?… UJodie Lundstram wayengumlingisi othandwayo we Uchungechunge lwethelevishini lwaseBrithani 'Abesifazana abadangele'.
Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Isifundo Sakhe sokuqala- Ukuphendula Umbuzo Olubomvu / Oluhlaza okwesibhakabhaka: It akunandaba ukuthi unemvelaphi yomndeni wakho idolobha laseLiverpool. Noma ngabe ungumhambi noma i-indigene, njengoba unyawo lwakho lusezithebeni zomuzi, uzobuzwa umbuzo obaluleke kakhulu wakho konke oku- Ngabe ubomvu [Liverpool] or oluhlaza okwesibhakabhaka [Everton] ?.
ILundstram yokuFunda yokuqala ayithola esemncane kwakufanele aphendule lo mbuzo. Isikweletu: I-Society19.
Ngenkathi uphendula umbuzo, kufanele uthandaze ukuthi uwuphendule ngendlela efanele. Lokhu akusho ukuthi ukhetha iklabhu engathathi hlangothi njengeTranmere Rovers. KuJohn Lundstram, impendulo kwaba Bomvu [Liverpool], ukukhetha okuhambe namalungu omndeni wakhe amaningi axhasa iklabhu enkulu yesiNgisi.
U-Asides wokuba ngumthandi webhola futhi adlale umdlalo ngezikhathi ezithile ngemuva kwezikhathi zesikole, uLundstram omncane wayazi ukuthi unethalente lokuzenzela igama ngebhola. KUSUKELA ekuqaleni, le ndoda enzima futhi enciphayo yesiNgisi yaqala ukufundela umsebenzi wayo umdlali wasesiswini emigodini yendawo.
Njengezingane eziningi ezifisa ukusekela ubomvu, uLundstram wayezama ngazo zonke izindlela ukujoyina iklabhu yakhe ayithandayo, iLiverpool. Kodwa-ke, ukungabikhona kwamathuba kunciphise inqubekela phambili yakhe yokuthi abizelwe ukuzoklanywa yiqembu. Eqhubekela phambili, washintshela komakhelwane nezimbangi zakhe, u-Everton owayemmemela emizileni.
Amaqiniso weJohn Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Isivivinyo esiphumelele sabona uJohn Lundstram ngonyaka u-2002 ebhaliswa kusethi ye-Everton academy eyamnika isiteji ukuthi abeke isisekelo sakhe somsebenzi. Lapho ejoyina iklabhu iMerseyside, konke kwakujabulisa ekuqaleni. Kepha uJohn omncane kwakudingeka azidele kakhulu egameni lomsebenzi wakhe. Isibonelo, tlapha kunezikhathi lapho kwakumelwe aphuthelwe amaqembu abalulekile okuzalwa, imiphakathi nomndeni nezinto ayezilangazelela esikoleni. Kepha ohlangothini lwe-flip, uLunny omncane (ofanekiselwa ngezansi) empeleni wayekwenza akuthandayo- ukwenza ukuthanda kwakhe kube ngumsebenzi wakhe.
UJohn Lundstram Ukuphila Kwasekuqaleni Ngebhola le-academy
U-Lundstram wakhombisa izethembiso ezinhle ngenkathi ethuthukisa amazinga e-Evertonia academy. Ngemuva kokuba umndeni wakhe udabuka eMerseyside (ongumuntu waseLiverpool), waba nelungelo lokuthola a imfundo yesikhathi esigcwele ngqo kuJulayi 2010.
Ngemuva kweminyaka emibili ye esebenza ngendlela yakhe emazingeni e-academy, uLundstram waphakanyiselwa ohlangothini oluphezulu lwe-Everton futhi wayenethemba elikhulu futhi eqiniseka ngekusasa nge UDavid Moyes.
Yebo! Lowo owayengumphathi we-Everton wayethandwa kakhulu ngeqhaza lakhe lokuqinisekisa ukuthi abadlali abasebasha eqenjini eliphakeme lase-Everton kanti uLundstram wayengomunye wabathandayo ngaleso sikhathi. Kodwa, uLunny omncane wayengazi AMAKHODI wayeseza ngendlela yakhe.
Amaqiniso weJohn Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo onzima Wokudumisa Indaba
Ukuphuka kwenhliziyo kuDavid Moyes: NgoMeyi 2013, ngokulandelayo I-Alex Ferguson's umhlalaphansi eManchester United, Moyes wazise u-Everton ukuthi uzoshiya iklabhu ukuze aphumelele Ferguson. Lezi zindaba, ngenkathi bezijabulisa UDavid Moyes, bekungekuhle kuLundstram ovele wadabuka ukuthi umphathi we-Everton kanye nabo bonke abaqeqeshi bekilabhu bonke babheke phambili emadlelo aluhlaza neMan United.
Lokho uLundstram akacabangayo empeleni kwaba ngokoqobo. Uthi bewazi?… UDavid Moyes yathathelwa indawo nguRoberto Martínez owaletha amalungu amane (ubuso obungajwayelekile) wabasebenzi bakhe basemgumbini waseWigan Athletic wasendlini e-Everton.
ILundstram yayiphatheke kabi enhliziyweni njengoba ibona amalungu UDavid Moyes'Abasebenzi be-everton backroom bamlandela eManchester United. Lokhu kulandelwe nguRoberto Martinez osayinisa abadlali abasha eqenjini lakhe elisha le-Everton, isinqumo esenze uLundstram ompofu (okufanekisiwe ngezansi) wesabe futhi ukhombise ukwehluka ngekusasa lakhe.
U-John Lundstram ompofu ucabanga ngekusasa lakhe no-Everton. Isikweletu Sezithombe UThebweb
Yize ephuma ukuyokhokha imali ayibolekile, uLundstram ubesakubona kungafanele ukuthi amoshe isikhathi sakhe uzama ukulwela indawo yakhe njengoba ebekelwa ngamabomu nguRoberto Martinez ngamabomu. Ngamazwi akhe abuhlungu;
"Nini UDavid Moyes ubese-Everton, bengiseqenjini lakhe futhi neqembu lokuqala lenza kahle impela kodwa kwathi nje lapho eshiya ikilabhu, bekungafani nami. Angizange ngibambe iqhaza eqenjini lokuqala ngaphansi kukaMartínez. Lokho kwaqeda ukuzethemba kwami, kwangibuyisela emuva futhi kwathinta ukukhula kwami. ”
Uthi bewazi?… Ngemuva kokuba nobusuku besikhathi esithile nekilabhu yezwe lakhe (i-Everton), uLundstram ompofu wakhululwa yiclub. Eqinisweni, ai-ny academy iziqu kanye nebhola lezinyawo elisencane eliphile ngokukhishwa yiklabhu lizokwazi kakhulu nobuhlungu obungokomzwelo obujulile nemiphumela emibi ngokomqondo engaba nayo. Abazali bakaJohn Lundstram, amalungu omndeni kanye nabangane abaseduze (kufaka neqembu lakhe i-Everton) babemi ngakuye kulezi zikhathi ezinzima.
Amaqiniso weJohn Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
Siqhubekela phambili: Ngemuva kokukhululwa ngu-Everton, uLundstram wavumelana nabazali bakhe nomndeni wakhe ukuthi baye ezingeni eliphansi kakhulu lebhola lesiNgisi ukuze bathole njalo iqembu lebhola lokuqala. Ekhuluma ngesinqumo, wake wathi;
“Kwakuyisinqumo esihle kunazo zonke engake ngazenza. Inhloso yami yokuqala bekuwukuzama ukuzama ukubuyela ku-Championship, bese ngifika kuPremier League ukuzofakazela ukuthi ngiyabaluleka ”
Uhambo lukaLundstram luqale nge-League Second side Oxford United ngaphambi kokujoyina iqembu elisanda kukhuthaza ubuMqhudelwano- uSheffield United ngoJulayi 2017. Ngegalelo lakhe elincane, wasiza ikilabhu ukuthi inyuselwe phezulu (iPremier League) ngemuva kweminyaka eyishumi ingatholakali.
Ukufakazela okungalungile kwe-Sheffield United Fans: Ubudlelwano phakathi komdlali nemenenja bungavama umahluko phakathi kokuphumelela noma inqwaba yezinkinga. Umphathi weSheffield United uChris Wilder usungule ubudlelwano obusondelene noJohn Lundstram ngaphambi kwesizini ye2019 / 2020. Ubuye wakubeka kwacaca ukuthi uLundstram uzoba yindoda yakhe emqoka kwisizini entsha ye-2019 / 2020, isinqumo esenze ukuthi kube nokukhononda okukhulu kakhulu kubalandeli bakaSheffield njengoba bebazi ukuthi udlala kancane ngesikhathi sokuphakanyiswa kwesizini yeChampionship.
Naphezu kwengcindezi enkulu yokulahla iLundstram, umphathi we-Sheffield uChris Wilder waphikisana nesifiso sika fan ngokumbeka ukuthi abe ngumuntu ohamba phambili ekuhlanganiseni lohlaka kanye nobuhle besikhundla sakhe se-Sheffield United. Lesi sinqumo sagcina sikhokhelwe ngemuva kokuba uLundstram edelele konke ukungahambi kahle ukuze afinyelele ekunyukeni kwe-meteoric yakhe ekuqaleni komdlalo weligi wokuqala we-2019 / 2020.
UChris Wilder uhambe ngokumelene nabalandeli beSheffield United ngokunikeza uJohn Lundstram ithuba lempilo yakhe. Isikweletu I-FourFourTwo
KuJohn Lundstram, bekunemisebenzi emibili namaphuzu okufanele kufakazelwe. Okokuqala bekungukuthi afakazele iphuzu kubalandeli beSheffield United (ayekwenzile) bese okwesibili ukuthola ukuthi iziphindiseleli ku-Everton, aqinisekise ukuthi uhlangothi lwayo lubashayile lapho behlangana okokuqala (Septhemba 21st, 2019).
UKUVIKELA KWE-SWEET: I-mission enkulu ekugcineni yafika ngosuku lwe-21st lwangoSepthemba 2019 lapho uSheffield aphuma umdlalo wabo bebhekene ne-Everton. Kwabanye abalandeli be-Everton, ukubukela umdlali oyimbangi edlala kahle noma ukufaka amaphuzu kubo kuyingxenye yephiko lomdlalo. Kepha ukubona uJohn Lundstram (umuntu owake wadlala nabo) ngokuba yindoda enkulu ekunqobeni kwabo (i-0-2) yehlise abalandeli nabadlali.
UJohn Lundstram waqinisekisa ukuthi uhlangothi lwakhe lunqoba u-Everton, ikilabhu eke yakhombisa ukungabi nalukholo kuye. Yilokhu ayekutshele I-Radio Sheffield ngemuva kwalowo mdlalo ongokomzwelo (Isikweletu kuya Isiteshi se-Sheffield United Youtube).
Njengasikhathi sokubhala, uJohn Lundstram useqedile ukubolekwa imali ebolekwe emgodini, engatholakali lutho kwiChannel Championship ukuze abe yinhliziyo yaleli qembu likagesi iSheffield United, i-feat emenza abe ngomunye wabadlali abahamba phambili besizukulwane sakhe. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Amaqiniso weJohn Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe esimweni sezulu, kuqinisekile ukuthi abalandeli bebhola abaningi kumele babuze ukuthi ngabe uJohn Lundstram unentombi noma unkosikazi. Yebo, tnakhu akuphikisi iqiniso lokuthi ukubukeka kwakhe okuhle, ukumamatheka okuhle okuhambisana nezimpawu zakhe ezithandekayo bekungeke kumenze abe phezulu kulolu hlu lokufisa kwezintombi ezingaba khona endodeni.
Abalandeli babuze imibuzo ukuthi ngabe intombi kaJohn Lundstram kungenzeka ibe ngubani. Isikweletu- Instagram
Njengasikhathi sokubhala, kuvela ukuthi uJohn Lundstram wenze umzamo oqinile wokungayivezi intombi yakhe noma unkosikazi wakhe (lokho uma esevele emshadweni oyimfihlo). Kodwa-ke, uma ubheka isimo esingazange sithethelelwe sePremier League maqondana nokwenza ubuhlobo kube sobala kakhulu, kungenzeka ukuthi iLundstram ayishadile, okusho ukuthi ubukhona be-WAG abukho.
Amaqiniso weJohn Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi i-Life yaJohn Lundstram kungakusiza ukuthola isithombe esiphelele sobuntu bakhe ekushayelweni komdlalo. Ukuqala, ungumuntu onobungane kakhulu futhi ongekho ebholeni, ungamthola kalula phakathi kwabantu abahluke kakhulu.
Ukwazi amaJohn Lundstram Amaqiniso Wokuphila Komuntu. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Ukwehluka kusuka esithombeni esingezansi, uzobona ukuthi uJohn Lundstram unokuqonda okunembile kokuphila. Ungumuntu ongafinyelela ubudlelwano obungcono kakhulu obungokomzwelo nezinye izidalwa ngokuyeka umsebenzi we-ego nokubeka izidingo zabangane bakhe ngaphambi kwezakhe. Wenza lokhu ngaphandle kokulindela ukubuya nokubuyiselwe okuthile.
Amaqiniso weJohn Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
UJohn Lundstram uqhamuka emndenini weLiverpool ogcwele amanye amathalente kunebhola. Impumelelo yomsebenzi wakhe futhi lokho kudadewabo bakhulisa ingxenye yomndeni wabo ekubhekeni inkululeko yezezimali. Udadewabo kaLundstram omdala, uJodie Lundstram (osesithombeni ngezansi) ungumlingisi ohlonishwayo owaqala ukubona impumelelo endimeni yakhe yombukiso wamaqiniso waseBrithani u-Desperate Scousewives.
Udadewabo kaJohn Lundstram- uJodie Lundstram. Isikweletu Sezithombe- Closeronline
Njengamanje, uJodie Lundstram ungusomabhizinisi wesikhathi esikhulu eLiverpool. Ungumsunguli weLash Beach UK ne-Aesthetics (a spa Medical) eLiverpool.
KuJohn Lundstram, ukuba yilungu lesibili lomndeni wakhe ukuthola isikhundla sosaziwayo kudale umuzwa ojulile wencazelo nenhloso ezimpilweni zabazali bakhe. Njengoba UJodie Lundstram waveza ekhasini lakhe le-Instagram, tIndlalifa eqhoshayo ngomama nobaba babone usuku olujabulisa kakhulu lwezimpilo zabo bebuka ukudlala kwabo ingane kuPremier League okokuqala. Okufanekiselwe ngezansi, bobabili umama nobaba bayaziqhenya ngokuba basebenzise amakhono abo okuba ngumzali ukuthuthukisa nokukhuthaza amakhono kaJohn Lundstram.
UJohn Lundstram ujabulele impilo ngemuva kokubona indodana yabo idla iPremier League. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Amanye Amalungu Omndeni: Hlangana namanye amalungu omndeni kaJohn Lundstram lapho bethwebula isithombe nonina womndeni weLundstram. Njengoba kuphawuliwe, umndeni kaJohn Lundstram uyunithi olusondele kakhulu olugcina izibopho eziqinile phakathi kwabo. Bayincazelo yokuthi umndeni ophumelelayo wanamuhla weLiverpool kufanele ubukeke unjani.
Hlangana namanye amalungu omndeni kaJohn Lundstram. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Amaqiniso weJohn Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - LifeStyle
Ngenxa yomsebenzi wakhe onamandla webhola, uLundstram uzenzele owakhe iqhaza ekuzimeleni kwezezimali. Manje ukwazi indlela yakhe yokuphila bekuzokusiza uthole isithombe esingcono senkambiso yakhe yokuphila.
UJohn Lundstram ungumuntu ngaleso sikhathi sokubhala kanzima onikeza imali ngokweqile ukucabanga esikhundleni sokuhlala egxile emaphusheni nasezinhlosweni zakhe zobungcweti. Kunemali eyanele yokuphila impilo ejwayelekile lapho kuphela isidingo esiyisisekelo kuye kanye namalungu omndeni wakhe siqinisekiswa. Yize umholo wakhe omkhulu njengomdlali webhola, kulungile ukusho ukuthi uJohn Lundstram uyisidambisigciwane esimweni sokuphila okungajwayelekile- esibonakala kalula ngalokho okubonayo ngezansi.
Ukwazi ama-John Lundstram Lifestyle Amaqiniso. Isikweletu Sezithombe Gym4U futhi Instagram
Amaqiniso weJohn Lundstram Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Mayelana negama Lundstram: Ngekhulu le-19th, abantu ababenegama lomndeni weLundstram babengaphezulu kwabamnyama nabalimi. (Umthombo- I-Ancestry.Co.Uk).
Imicimbi Eyenzeka Losuku Azalwa Ngayo: Ungakhohlwa ukuthi unyaka azalwa ngawo uLundstram, iBrazil Won the World Cup ye-1994 e-United States. Futhi, iNingizimu Afrika ibambe ukhetho lwayo lokuqala lwezizwe ngezizwe (Ephreli 29) olwabona iqhawe labo uNelson Mandela ekhethwe nguMongameli.
I-Ebola Virus e-1994: Ngonyaka azalwa ngawo uJohn Lundstram, a Ukuqala okusha kwegciwane le-Ebola ebulalayo kwaqala, ngokunembile kwi-9th kaMeyi 1994 eZaire. Iqophe amazinga aphezulu kakhulu afe noma yiliphi igciwane le-pathogenic lomuntu owake wasaziwa esintwini.
IRwanda e-1994: Kusihlwa kwe-6 Ephreli 1994 (unyaka uLundstram azalwa ngawo), indiza ebithwele uMongameli waseRwanda uJuvénal Habyarimana kanye nomongameli waseBurundi uCyprien Ntaryamira, bobabili abangamaHutu, badutshulwa ngemicibisholo ebheke phezulu lapho belungiselela ukuyofika eKigali, eRwanda.
Ngonyaka we-1994, an Impi Yomzabalazo eqhubekayo eRwanda phakathi kweMajority Hutus kanye namaTuis amancane.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iJohn Lundstram yethu Yobuntwana Indaba ye-Plus Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Declan Rice Rice Story Story Plus Untold Biography Facts